Iinkqubo zegridi, ukubaluleka kokusetyenziswa kwazo kuyilo. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inkqubo yegridi, incwadana ebalulekileyo yoyilo
UVicky | | Idizayini yeMifanekiso, Izixhobo zoYilo, Amaqhinga
Uvile ngosaziwayo Iigridi ezisetyenziselwa ukuyila Kwaye kukuba ukubaluleka kokusetyenziswa kwayo akufuneki kutyeshelwe. Iigridi okanye iigridi zisinceda uku-odola uyilo kwindawo enikiweyo, siyicwangcise kwaye siyilungiselele ngokufanelekileyo ukuphunyezwa kwayo nakweyiphi na indawo.
Abaqulunqi abaninzi bakhetha ukungazisebenzisi iigridi kuba baziva ngathi bayayilinganisela indalo, ngelixa abanye ukusebenzisa iigridi kubalulekile. Ukucoceka akuthethi ukulinganiselwa, iigridi sisixhobo esinokulungiswa, sophuke kwaye sibe isiseko sayo nayiphi na uyilo. Ukuzisebenzisa kusenza sibe nolawulo olupheleleyo kuyilo lwethu kwaye iziphumo esifuna ukuzifumana zicacile.
Ukusetyenziswa kweigridi yinto ekhethiweyo, nangona kukho imigaqo ethile yokwakheka ecebisa ukusetyenziswa kwayo. Ngesi sizathu, kule minyaka idlulileyo, uninzi lwabayili kunye ne studio zoyilo, ngolwazi lwesi sixhobo, baseke uthotho lweegridi eziyimfuneko kunye neegridi zesiko.
Ungazi njani ngakumbi ngezi gridi? singafumana ulwazi olungenasiphelo oluncedo malunga nokusetyenziswa kweigridi kwi-intanethi kodwa sincoma incwadi Iinkqubo zegridi de UJosef Müller-BrockmannIncwadana yemigaqo engqongqo kubaqulunqi apho isibonisa ukusethwa kwayo nangayiphi na indlela yayo njengepowusta, incwadana enemifanekiso, imagazini, ikhathalogu okanye uhlelo. Yi incwadi yokubonisana kwaye uhlala unazo xa usakha uyilo lwakho onokuluthenga [amazon link = »B00HNEBO3I» title = »apha» /]. Uyilo olulungileyo lunokuba sisiphumo sokusebenzisa iigridi nokwazi cwangcisa ngcono indawo yakho yokusebenza.
Ungayithenga le ncwadana nakwesiphi na isitolo seencwadi esibonakalayo okanye online. Ungalibali ukuba unokwenza iigridi zakho ngokweemfuno zakho xa uyila kodwa kuqala kufuneka wazi ukuba basebenza njani ukuze bakwazi ukuzilungisa ngendlela othanda ngayo.
Nayi eminye imizekelo yeegridi ezisetyenziselwa ukwakha iilogo ezilungeleleneyo kunye nokuhlelwa kohlelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Inkqubo yegridi, incwadana ebalulekileyo yoyilo
Iindaba eziza kwi-Photoshop kwi-iPad kwisiqingatha sokuqala se-2020
Amagcisa amaninzi ahlangana ukuze anike ezona zidalwa zithandekayo kumnyele: usana uYoda